Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Iskaga Baxay Golaha Xaquuqul Insaanka ee QM.
Maraykanka oo Iskaga Baxay Golaha Xaquuqul Insaanka ee QM.
Posted by ONA Admin	/ June 21, 2018
Maraykanka ayaa shaaciyey inuu isaga baxay Golaha Xaquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay (QM) iyagoo difaacaya gabood-fallada ay geysato Israel.
Safiirka Maraykanka u fadhiya QM Nikky Haley oo go’aankan shaacisay ayaa sheegtay in golaha QM u qaabilsan Xaquuqul Insaanka isu bedalay gole lid ku ah maamulka Israel oo kaliya. Waxay Nikky sheegtay in 5-tii qaraar ee ugu danbeysay golahaasi kasoo baxay si gaar ah yool looga dhigtay cambaareynta Israel, iyadoo ku dooday in golahaasi dalalka xubnaha ka ah ay si gaar ah dagaal ugu hayaan Israel.
Dowlada Maraykanka ee iyadu gar iy gardaro ku difaacda Israel ayaa horey u horjoogsatay dhawr mar qaraar kasoo bixi lahaa Golaha Amaanka ee looga hadlayey xasuuqa Israel ku heyso shacabka Falastiin.
Go’aankan Maraykanka qaatay ayaa kusoo beegmay maalmo kadib markii Golaha loo dhan yahay ee QM ay cod aqlabiyad ah ku taageereen cambaareynta maamulka Israel xasuuqa uu ka geysatay Gaza, marka laga reebo Maraykanka iyo 7 dal oo kale oo iyagu taageeray Israel.
Xukuumada Trump oo iyadu sii xoojisay difaacida maamulka isir-sooca ah ee Israel ayaa horey sidan oo kale sanadkii hore 2017 uga baxday hay’ada QM u qaabilsan arrimaha Dhaqanka ee UNESCO iyadoo ka gadoodsan go’aano ka dhan ah Israel. Wuxu Maraykanka bilowgii sanadkan joojiyey lacagtii uu siin jiray Hay’ada caawisa Qaxootiga reer Falastiin ee loo yaqaan UNRWA.
Go’aanka Maraykanka uga baxay Golaha Xaquuqul Insaanka ayaa waxaa cambaareeyey hay’adaha Xaquuqul Insaanka iyo waliba dalalka Midowga Yurub oo sheegay in go’aankan uu si weyn hoos ugu dhigi doono sumcadii Maraykanka ku lahaa caalamka.